● Mampitombo ny fahombiazany ny mpampita hafanana tsy manam-paharoa.
● Natao hifehezana ny mari-pana hidiran'ny avo ka hatramin'ny 80 ℃
● Vata fampangatsiahana tontolo iainana R134a sy R407C.
● Ny teboka kely amin'ny welding, mety hampidi-doza ny famoahana.
● Ireo singa azo antoka dia manome serivisy maimaim-poana mandritra ny taona maro.
● Ny rafitra fanaraha-maso ny hafanan'ny vata fampangatsiahana mandeha ho azy dia mitazona ny mari-pana marina.
● Fanomezana herinaratra isan-karazany ho an'ny safidy.
● Vidina ambany, vidin'ny tsindry ambany ary teboka ando tsy miova.
● Mora apetraka sy tazonina.
Fizarana lehibe momba ny vokatra
a. Exchanger hafanana amin'ny rivotra
d. Compresseur refrigerant
d. Valve mandalo baomba mafana
e. Valizy fanitarana
f. Mpisaraka rano
h. Rano mandeha ho azy
i. Fiarovana amin'ny tsindry ho an'ny compressor
j. Fifehezana tsindry fanerena (valizy rano)
MODELY fahafahana Fidirana herinaratra Hery famatrarana Fan Power Ao amin'ny / Outlet tsindry Tendrombohitra Dew Size Lanja
m3 / min kw w DN bara MG kg
LDR-1 1.5 Dingana IRAY 0,58 80 25 4-15 2-10 ℃ 700x420x670 78
LDR-15 17.0 Dingana telo 2.8 180 x 2 65 1450x750x1120 320
HDR-1 1.5 Dingana IRAY 0,58 80 25 4-15 2-10 ℃ 700x420x670 90
HDR-15 17.0 Dingana telo 2.8 180 x 2 65 1450x750x1120 420
Teo aloha: Fantsom-panafody mihodina lozisialy solika avy amin'ny solika miaraka amin'ny IP54 Motor German Air End
Manaraka: 2naona hatramin'ny 8inch azo alentika ao anaty rano ao anaty lavadrano
Fanamainana rivotra voahidy
Fanamainana rivotra Desiccant
Fanamainana rivotra avo lenta